Miverina amin'ny Vogue ny Marketing amin'ny finday - Ahoana no ahafahan'ny marika mandeha ho azy sy mampitombo ny fampielezan-keviny amin'ny finday? | Martech Zone
Miverina amin'ny Vogue ny Marketing Mobile - Ahoana no ahafahan'ny marika mandeha ho azy sy mampitombo ny fampielezan-keviny amin'ny finday?
Talata, Janoary 11, 2022 Talata, Janoary 11, 2022 Dimitris Maniatis
Eken'ny rehetra ny fisian'ny fitaovana finday. Amin'ny tsena maro amin'izao fotoana izao - indrindra any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana - dia tsy tranga iray fotsiny izany finday aloha fa finday ihany.
Ho an'ny mpivarotra, ny areti-mifindra dia nanafaingana ny fifindran'ny nomerika miaraka amin'ny fahafahan'ny mpampiasa mikendry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny cookies an'ny antoko fahatelo.
Midika izany fa vao mainka manan-danja kokoa ankehitriny ny fantsona finday mivantana, na dia marika maro aza no mbola manambatra ny fanentanana ara-barotra mangingina sy tsy mitovy izay mampifandanja ny elanelana misy eo amin'ny Internet sy ny nentim-paharazana. finday aloha fomba.
Betsaka ny teboka fanaintainana, indrindra ny tsy fisian'ny ID mpampiasa tsy miovaova amin'ny sehatra sy fantsona samihafa. Matetika ny mpampiasa farany no mahazo spam be loatra, ary ny hafatry ny marika dia lasa tsy mifanaraka - na very tanteraka.
Ambony dia namolavola azy Grow sehatra marketing amin'ny finday mba hamahana ireo olana ireo. Namoaka ny sehatra izy io tahaka ny nahatonga ny valan'aretina COVID-19 navadika an'izao tontolo izao ary nanao ny firotsahana nomerika ho ilaina fa tsy haitraitra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa.
Inona àry no atao hoe Grow?
Andeha isika hanomboka amin'ny fototra. Ny Grow dia sehatra ara-barotra dizitaly izay ahafahan'ny fikambanana manolotra fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny fantsona marobe, indrindra amin'ny alàlan'ny fitaovana finday, amin'ny fampiasana fantsona toy ny tranokala finday, SMS, RCS, fampandrenesana fitaovana ary tambajotra sosialy. Izy io dia atolotra ho sehatra serivisy ho an'ny automation marketing. Na izany aza, ny Upstream dia manana tolotra tolotra mitantana ihany koa, izay miasa tsara amin'ny toe-javatra izay tsy ananan'ny mpanjifa ny bandwidth fanampiny na ny fahaiza-manaony amin'ny fampandehanana fampielezan-kevitra ara-barotra nomerika.
Ny sehatra dia mikendry ny ho a iray-fijanonana-tsena ho an'ny marika. Izy io dia mampivondrona ny famoronana votoaty, automatique fampielezan-kevitra, analyse, fahatakarana ny mpihaino, fisorohana ny hosoka doka ary ny fahaiza-mitantana fantsona ao anaty sehatra iray.
Ny dingana voalohany dia ny famoronana amin'ny alàlan'ny Campaign Studio izay ahafahan'ny mpanjifa mamorona dia mavitrika, fantsona maro, tsy misy traikefa amin'ny coding. Tena traikefa intuitive izy io, mampiasa drag and drop hanamboarana, hanovana ary hijery ny traikefan'ny mpampiasa rehetra.
Manaraka izany dia tonga ny scale. ny Marketing Automation Ny fitaovana dia ahafahan'ny fikambanana manao automatique ny fikorianan'ny varotra isaky ny mpanjifa mba hahatratrarana ny lalan'ny fividianana namboarina, mba hahafahan'ny marketing amin'ny ambaratonga mbola hahatsiaro ho manan-danja, mahatsikaritra ara-tontolo iainana ary manokana.
The Fitantanana ny mpihaino mamela ny orinasa hamoaka, hitantana, hamaritana, hamakafaka ary hampavitrika ny angona mpanjifa ho an'ny fanatanterahana fampielezan-kevitra marina kokoa izay mihoatra ny fitambaran'ny angon-drakitra fototra mba ahafahana mizara tsara kokoa ny tetibola.
Ary avy eo ny Fahatakarana sy Analytics endri-javatra, izay mamorona ny hazondamosin'ny sehatra Grow. Amin'ny alàlan'ny fametrahana angon-drakitra be dia be amin'ny asa, ny orinasa dia afaka manatsara ny fampielezan-kevitra mba hahatonga azy ireo hahomby kokoa rehefa mandeha ny fotoana amin'ny alàlan'ny fanangonana hevi-baovao momba ny zava-bita, ny firotsahana, ny churn, ny fidiram-bola ary ny maro hafa.
Ny fiarovana amin'ny hosoka dia avy amin'ny alàlan'ny Secure-D, endri-javatra manohitra ny hosoka an'ny Upstream, izay miaro amin'ny hosoka amin'ny doka amin'ny fampiasana fanakanana dokam-barotra mialoha, fanakanana ny fomba fitondran-tena, fomba fanadiovana fiampangana, fampandrenesana fitaovana voan'ny aretina, calibration, fanadihadiana momba ny zava-nitranga ary fifandraisana azo antoka.
Izany no mifanaraka amin'izany rehetra izany. Andeha hojerentsika izao ny fomba fampiasan'ireo marika mihevi-tena mialoha ny sehatra.
Miaraka amin'ny fahalavoan'ny cookies avy amin'ny ankolafy fahatelo, tsy maintsy misy marika labiera malaza iray nanomboka nanangana fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa amin'ny iray amin'ireo tsenany lehibe - Brezila. Manoloana ny fiovana toy izany ny marika dia naniry ny hanomboka hanorina arsenal ny voalohany-antoko angon-drakitra, mba hahafahany mamolavola fomba mivantana kokoa handraisana ny mpihaino sy hampiroboroboana ny tolotra vaovao - ary hizara tsara kokoa ny teti-bolany.
Amin'ny fampiasana ny Grow sehatra, afaka niditra tao amin'ny tobin'ny mpanjifan'ny mpandraharaha finday Breziliana lehibe iray ny marika – nanolotra angona finday maimaim-poana 50MB ho takalon'ny antsipiriany. Tao anatin'ny herinandro dia namokatra fitarihana maherin'ny 100,000 izy io. Izany dia nanome azy dobo lehibe ho an'ny vinavina ahafahany mandray anjara sy mandefa fampiroboroboana ary manavao ny tanjaky ny varotra ao amin'ny faritra.
Mpanjifa iray hafa, mpandraharaha lehibe amin'ny fifandraisan-davitra Afrika Atsimo, dia nila nampitombo ny fandraisana ny tolotra fandefasana mozika ao amin'ny tsenany eo an-toerana. Na izany aza, niatrika olana momba ny fahazoana mpanjifa sy ny vola ny mpandraharaha satria tsy nahomby ny fampielezan-kevitra teo aloha. Amin'ny fotoana lava kokoa, mila ny serivisy vaovao hifaninana mivantana amin'ny Spotify sy Apple Music ary ho lasa serivisy fandefasana mozika lehibe hofidiana any Afrika Atsimo.
Tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ny fampielezan-kevitra dia nahita fitomboana 4x manaitra ny mpampiasa ny tolotra fandefasana mozika. Nandritra ny fampielezan-kevitra naharitra 8 volana dia efa ho 2 tapitrisa (1.8 tapitrisa) ny mpanjifa vaovao natolotra ny serivisy. Tao anatin'ny 8 volana monja, ny marika dia nanova ny serivisy nomerika avo lenta - saingy tsy mahomby - ho loharano matanjaka amin'ny fidiram-bola miverimberina sy mpitarika ny tsena eo amin'ny habaka.
Raha fintinina, ny tanjon'ny Grow dia ny hamerina indray ny marketing amin'ny finday, manome ny mpampiasa ny dia lavitra indrindra ho an'ny mpanjifa, mifanaraka amin'ny toetrany sy ny filany manokana, mitondra ny fahombiazan'ny varotra amin'ny ambaratonga vaovao ho an'ny orinasa. Ny sehatra dia voaporofo fa manome 3x ny tahan'ny resaka ary 2x ny tahan'ny fandraisana anjara raha oharina amin'ny fampielezan-kevitra nomerika nentim-paharazana, izay tsy mila fampiasam-bola mialoha.
Ity dia fivarotana finday vita tsara.
Momba ny Upstream
Upstream dia orinasa teknolojia lehibe eo amin'ny sehatry ny varotra finday any amin'ireo tsena vao misondrotra manan-danja indrindra eran-tany. Ny sehatra automation marketing amin'ny finday, Grow, tsy manam-paharoa amin'ny karazany, dia manambatra ny fanavaozana eo amin'ny sehatry ny automation ara-barotra sy ny angon-drakitra, ny fiarovana amin'ny hosoka amin'ny dokambarotra an-tserasera, ary ny fifandraisana nomerika maromaro mikendry ny hamorona traikefa manokana ho an'ny mpanjifa farany. Miaraka amin'ny fanentanana ara-barotra amin'ny finday maherin'ny 4,000 mahomby, ny ekipa Upstream dia manampy ny mpanjifany, mitondra marika manerana izao tontolo izao, mifandray amin'ny mpanjifany amin'ny fomba mahomby kokoa, mampitombo ny varotra nomerika ary mampitombo ny fidiram-bolany. Ny vahaolana ambony dia mikendry mpanjifa 1.2 lavitrisa any amin'ny firenena 45 mahery any Amerika Latina, Afrika, Afovoany Atsinanana ary Azia Atsimo Atsinanana.
Tags: apple musicfanakanana fomba fitondran-tenavoalohany-antokomitombomno channelsfitantanana ny mpihaino findayangona momba ny fitondran-tena findayfandaharam-potoana fanentanana amin'ny findayorkestra findaychurn findayfamoronana findayangona demografika findayFitaovana findayfifandraisan'ny findayfinday alohampanamboatra dia findaymobile kpimobile kpisfinday-barotraautomatique marketing amin'ny findaysehatra automation marketing amin'ny findayfanentanana ara-barotra amin'ny findayangon-drakitra fampisehoana findayvavahadin'ny findayfampandrenesana momba ny findayfinday retargetingvola miditra amin'ny findayvalisoa findayfiarovana findayfizarana findaysosialy findaylasibatra findaydata transactional findayMusicfanakanana ai predictivespotifymanokana eo ambonymitombo ambony
Dimitris Maniatis Tuesday, January 11, 2022 Tuesday, January 11, 2022
Nanatevin-daharana i Dimitris Maniatis manokana eo ambony tamin'ny taona 2017 no nitarika ny Secure-D. Teo ambany fitarihany, ny Secure-D dia nitombo ho sehatra fiarovana nahazo mari-pankasitrahana, naorin'ny mpitatitra, atokisan'ny mpandraharaha tambajotra finday eran'izao tontolo izao. Lasa Tale Jeneralin'ny Upstream izy tamin'ny Janoary 2020 ary nahomby tamin'ny fanovàna ny orinasa ho sehatra fivarotana finday. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Upstream dia nanao dokam-barotra tamin'ny alàlan'ny 'web all things web' i Dimitris, masoivohom-barotra nomerika naoriny tamin'ny 2009.
Amboary ny ezaka ataonao amin'ny varotra 2022 miaraka amin'ny fitantanana ny fanekena
Tena zava-dehibe ve ny sarin'ny mombamomba anao LinkedIn?